Dhir daaweedka Kahortagaya Ujeeddooyinka Gaadiidka Nabdoon ee Kandira | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 KocaeliDhir daaqaya oo horjoogsanaya aragtida aragtida gaadiidka safarka ah ee Kandira waa la caddeeyay
Gaadiidka aaminka ah ee laambadlaha, haramaha ka ilaaliya xanuunka aragga ayaa laga saaray
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo ahmiyada siisa mashruucyada gaadiidka ee muwaadiniinta u safraya si raaxo leh, ayaa kusii wadaysa howlaheeda amaanka awgood. Xadiiqadaha iyo Xadiiqadaha Jardiinadu waxay baneeyaan laamaha geedaha, qodxan iyo qodax kale oo xannibaya aragga baabuurta, gaar ahaan jidadka ku yaal aagagga miyiga. Xaaladda guud, nadaafadda iyo shaqada dayactirka ayaa laga fuliyay wadada u dhexeysa Akçakese (Xabsiga) iyo Tuulada Araman ee degmada Kandıra.
Nadiifinta ayaa lagu sameeyay 30 KILOMETERS
Kooxaha Xadiiqadaha iyo Xadiiqadaha Beerta ayaa nadiifiyay wadada dhinaceeda ah 30-kiiloomitir oo ka mid ah wadada Akçakese - Araman Village. Kooxuhu waxay jareen geedaha ku fidsan wadada, waxay gooyeen geedaha qodxanta leh ee wadada dhinaceeda ah. Intaa waxa u dheer, canabkii sii ballaadhiyey oo xidhay calaamadaha u dhawaa jidka ayaa la gooyay.
HERBS KU XIDHAN MUUQAALKA
Laamaha geedaha iyo doogga kale ee wadada dhinaceeda waxay ka leexiyaan aragtida baabuurta waxayna ka dhigaan xariiqyada wadada geeska mid aan muuqan. Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sidoo kale nadiifisaa laamahaas iyo haramaha kuwaas oo qatar ku ah nabadgelyada wadooyinka iyaga oo si joogto ah u xidhaya goobta aragtida. Hawlaha nadiifinta waddooyinka waxaa si joogto ah loo fuliyaa sanadka oo dhan, gaar ahaan wadooyinka miyiga ee Kocaeli.
2035 ee Bursa 71 Target
Dhir daaweedka waddada jidka tareenka si loo nadiifiyo
Dhir daaweedka qashinka tareenka ayaa lagu buufin doonaa
Xuruufta Iskeelka ah ee Rakaabka Baska ee Manisa
6 Ka Hortagga Xuquuqda Lagu Bedelayo Antalya
Nidaamka tigidhada ee dadka isku xira gawaarida magaalada Bursa ayaa isku khilaafsan
Fikradda la weydiistay inay midoobaan kiisaska BRT